ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး | Mahasi Sasana Yeik Tha
Mahasi Meditation Centre was opened in 1950, with the Most Venerable Mahasi Sayadaw as its Principle Preceptor. The most Venerable Mahasi Sayadaw started the teaching of the Mahasi method of insight in 1947 and taught for 33 years until his death in August, 1982. Read More » The Venerable Mahæsø Sayædaw was one of the very rare personalities in whom there wasabalanced and high development of both profound erudition linked withakeen intellect, and deep and advanced meditative experience. Read More » (၂၂-၁၂-၂၀၁၅) မဟစည်ဓမ္မဗိမာန်တောကြီတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ဓမ္မကထိကအစည်းအဝေး
Read More » (၆၆) နှစ်မြောက် မဟာစည်သြ၀ါဒခံယူပူဇော်ပွဲကြီးသို့ကြွရောက်တော်မူလာကြသောဆရာတော်ကြီးများ
Read More » (၆၆) နှစ်မြောက် မဟာစည်သြ၀ါဒခံယူပူဇော်ပွဲကြီးသို့ကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်တော် ဆရာတော်သဃာတော်များ
Read More » 12345 Home
You are hereHome	ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး
Submitted by mahasi_editor on Thu, 05/19/2016 - 14:09 ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကြီးကို (၂၇-၃-၂၀၁၆) (တနင်္ဂနွေနေ့) နေ့လယ်(၁)နာရီအချိန်တွင် မဟာကုသလကာရီ ဓမ္မသာလာမဏ္ဍပ်ကြီးအောက်ထပ်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြပါ သည်။
(Picture)မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ နာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ငါးသိုင်းချောင်း ဆရာတော်ကြီး သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒာသက္က က သြ၀ါဒတရားချီးမြှင့်နေစဉ်။
ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဒေါက်တာဦးတင့်စိုးလင်း နှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ များမှ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးအား လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းနေစဉ်။(Picture)ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဒေါက်တာဦးတင့်စိုးလင်းမှ အဖွင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ်။
(Picture)နှစ်ပတ်လည် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးကြီးသို့ တက်ရောက်လာကြ သော အမှုဆောင်လူကြီးများ အသင်းသူ အသင်းသားများနှင့် ယောဂီ သူတော်စင်များ။
(Picture)ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးရဝေထွန်းမှ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေစဉ်။
(Pciture)အဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရေးမှူး ဦးလှမြင့်မှ (၆၇)နှစ်မြောက် သင်းလုံးကျွတ် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် (၆၈)နှစ်မြောက်အစီရင်ခံစာအားတင်သွင်းနေစဉ်။(Picture)(၆၇)နှစ်မြောက် သင်းလုံးကျွတ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် (၆၈)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို ဗုဒ္ဓသာသနာ နုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် အရန်အမှုဆောင်မှ အတည်ပြုရန် အဆိုတင်သွင်းနေစဉ်။
(Picture)အဖွဲ့ချုပ်ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးကျော်ဇောမှ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာကို တင်သွင်းနေစဉ်။
ဦးဝင်းသင်နှင့် စာရင်းစစ်များအဖွဲ့မှ စာရင်းစစ် ဒေါ်ခင်သန့်နိုင် မှ စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို တင်သွင်းနေစဉ်။(Picture)
အမျိးသမီး-ယောဂီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းမှ ဘဏ္ဍာရေးမှူး အစီရင်ခံစာနှင့် စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုရန် အတွက် အဆိုတင်သွင်းနေစဉ်။
ဒေါက်တာဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း အဆိုတင်သွင်းသည်ကို အမျိုးသမီး အဖွဲ့ အမှုဆောင် ဒေါ်ကျင်ဝိုင်းမှ ထောက်ခံနေစဉ်။
(Picture)ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဒေါက်တာဦးတင့်စိုးလင်းမှ ဦးဝင်းသင်နှင့် စာရင်းစစ်အဖွဲ့မှ စာရင်းစစ်များအား ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ် ချီးမြှင့်နေစဉ်။
(Picture)ဗုဒ္ဓသာသနာနုဂ္ဂဟအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှ နိဂုံးချုပ် အမှာ စကားပြောကြားနေစဉ်။